Sida loo sameeyo daboolka: walxaha garaafyada iyo sifooyinka guud | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo dabool
Xigasho: Diario de Cádiz
Maalin kasta waxaa jira dad badan oo ku dhex wareegaya warbaahinta xayaysiisyada, ha ahaato online ama offline, laakiin waxay noo yihiin warbaahin muhiim ah.
Waxa dad badani aanay garanaynin sida loo nashqadeeyo dabool ku habboon mawduuca majaladda, baloog ama buug kasta, oo la kulma. noocyo kala duwan oo wax-akhris ah oo ku habboon iyo in ka sarreeya, mid kasta oo ka mid ah qaybaha garaafyada taas oo ay ku jiraan: far, sawiro, garaafyo ama sawiro, waxaa lagu soo gudbiyaa halabuur qumman.
Naqshadeeyuhu ma aha oo kaliya inuu awoodo inuu fahmo waxa uu naqshadeynayo, laakiin sidoo kale waa inuu muhiimad siiyaa waxa dhabta ah ee muhiimka ah. Taasina waa sababta qoraalkan aan kuugu tusi doono sida ay muhiimka u tahay daboolku.
1.1.4 Magaca/lambarka koorsada ama fasalka
1.1.6 Magaca macalinka
2 Sida saxda ah ee daboolka loo sameeyo
3 Noocyada daboolka
3.1 Daboolka tusaalaha ah
3.2 daboolka qoraalka
3.3 Daboolka fikradda iyo la taaban karo
4 farsamooyinka naqshadeynta
4.1 isticmaal midabada
4.2 Wanaagsan alaabta
4.3 Isticmaal agabka sida sawirada oo dhiirigeli
Xigasho: Audrey's Croissant
Jaldigu waa shayga ugu muhiimsan ee warbaahin kasta, maadaama ay tahay waxa ugu horreeya ee daawadayaasha ama akhristuhu arko. Sidaa darteed, waa waxa ugu horreeya ee la is weydiiyo, ee la dhaleeceeyo oo ay indhaheennu gartaan markii ugu horeysay. Waa in sidoo kale la ogaadaa in daboolka qoraalka ama mashruuca xirfaddu ay tahay inay noqoto waxa ururiya dhammaan macluumaadka aan aasaasnay ​​iyo ku soo koob ciwaanka ugu muhiimsan, qoraal hoosaadka iyo magaca hore iyo kan dambe.
Sidoo kale macluumaadka fasalka sida magaca ama lambarka koorsada, taariikhda, magaca borofisarka iyo magaca machadyada. Faahfaahin kale oo ay tahay in la tixgeliyo waa in daboolka aan la tirineynin oo waa inuu lahaadaa meel ku dhow 2 sentimitir dhinac kasta.
Xigasho: alaabta guriga
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku xisaabtano waa qaybinta walxaha aan rabno inaan ku darno jalkeena, waana sababta loo baahan yahay.
Cinwaanku aad buu u fudud yahay in la sameeyo oo waxay qaadataa dhawr daqiiqo oo keliya. Waa qaybta koowaad ee daboolka waana shayga ugu horreeya ee akhristuhu arko.
Sababtan awgeed waa in aad ka taxadirtaa in aanay ku jirin wax khalad ah maadaama ay taasi keeni karto aragti xun; akhristuhu wuu ku xisaabtami karaa tan ka hor inta aanu qiimayn tayada waxa ku jira.
Magaca shaqadu waa inuu ahaadaa mid cad oo daacad ah si si fudud loo garan karo waxay shaqadu ku saabsan tahay. Waxa jira xeerar ama heerar APA gaar ah oo boggaga cinwaanka lagu maamulo. Waa muhiim in la ogaado shuruudaha gaarka ah ee waaxda, jaamacadda ama machadyada.
Guud ahaan warbixinnada sayniska, waraaqaha cilmi-baadhista iyo qoraallada, cinwaanku waxa uu dhex maraa badhtanka oo la toosiyaa, dhexda bogga. Haddii shaqadu leedahay qoraal-hoosaad, waxa la dhigayaa wax ka hooseeya cinwaanka.
Marka laga hadlayo shaqada kooxeed, waa in la aqoonsadaa magacyada buuxa ee xubnaha kooxda. Magaca qoraaga oo buuxa waa inuu ku yaal bogga cinwaanka. Waa inaad gelisaa magaca oo buuxa, oo leh magac hore, labadaba magacyada dambe iyo magaca dhexe haddii aad rabto.
Cunsurkaan waxaa lagu dhejin karaa dhowr sadar oo ka hooseeya cinwaanka. Waa lagama maarmaan in ay ku yaalliin jaldigaas maaddaama habkan borofisar ama qof kasta oo akhriya shaqada uu garan karo cidda soo diyaarisay cilmi-baarista, warqad cilmi-baariseed ama tesis.
Waad ku mahadsan tahay qoraaga, waxaad si fudud u garan kartaa cidda fulisay shaqada ama cilmi-baarista. Dhammaan shaqadu waa inay lahaadaan hal ama ka badan oo qoraayaal ah; Taas macneheedu waa in aanay waligood qarsoodi noqon. Dhammaan qoraallada, cilmi-baarista sayniska ama shaqada tacliinta waa inay lahaadaan buundooyinka qoraaga.
Guud ahaan, taariikhda bixinta shaqada waxaa la dhigayaa xagga hoose ee daboolka, badanaa waa waxa ugu dambeeya ee la dhigo daboolka iyo caddaynaysa maalinta, bisha iyo sanadka mashruuca la fuliyay.
Waa muhiim in la qoro sababtoo ah iyada oo loo mahadcelinayo akhristuhu wuxuu ogaan karaa taariikhda la qoray shaqada, cilmi-baarista ama cilmi-baarista cilmi-baarista.
Haddii ay noqoto daboolka qoraalka jaamacadda ama ay ku jirto mawduuc tacliineed oo dheeraad ah, waxaa sidoo kale la dhigaa:
Magaca/lambarka koorsada ama fasalka
Waa lagama maarmaan in la dhigo magaca fasalka ama mawduuca daboolka si mawduuca ama aagga cilmi-baarista ee shaqada si dhakhso ah loo ogaado. Akhristuhu waa inuu awood u leeyahay inuu si dhakhso ah u aqoonsado aagga daraasadda si uu u ogaado bilawga waxa tesis ama shaqada akadeemiyadeed ay noqon doonto.
Haddii fasalku leeyahay nambar, waa in sidoo kale la dhigaa si macalinku u garto bilawga fasalka ardayga/shaqada la qiimeynayo uu ka tirsan yahay. Tani waxay ka dhigaysaa shaqada mid aad u fudud.
Daboolka, waa in lagu dhejiyaa shahaadada la baranayo ama koorsada shaqada loo agaasimay. Waa lagama maarmaan in la dul saaro jaldiga maadaama sidan aad ku ogaan karto heerka tilmaamaha uu qoraagu leeyahay marka uu qorayo warqadda akadeemiyada ama tesis.
Hoosta meesha magaca fasalka la dhigo, waxaad ku dhejin kartaa magaca macalinka oo buuxa. Waa lagama maarmaan mar haddii sidaan oo kale akhristuhu u garan karo cidda shaqada loo hibeeyey. Macallinku waa kan inta badan ku meeleeya ama gacanta ku haya waraaqaha tacliimeed ee koorsadiisa gaarka ah.
Bogagga ciwaanka qaarkood waxa kale oo ka mid ah goobta lagu qoray ama lagu qabtay shaqada tacliinta. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in si fudud loo ogaado halka cilmi-baaristu ka imanayso; goobta lagu dhigay gobolka ama gobolka iyo dalka ay ka soo jeedaan shaqada ama qoraalka.
Badanaa waxay ku taallaa dhammaadka daboolka, inkastoo tani ay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran shaqada tacliinta ama machad gaar ah
Sida saxda ah ee daboolka loo sameeyo
Si loo naqshadeeyo daboolka saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhowr arrimood:
cabbirka warqaddaSida caadiga ah waa DIN A4
Cabbirka farta: Haddii ay tahay daabacaad, had iyo jeer waxaa habboon in la haysto ugu badnaan 12 dhibcood iyo in la isticmaalo xarfo si ku filan loo akhriyi karo.
Xagga mareegyada Waxaa la caddeeyey inay yihiin: diyaaradda sare 3cm, bidixda 4cm, booska hoose 3cm, midigta 2cm.
Daboolka tusaalaha ah
Daboolista sawirku waa noocyo gaar ah oo dabool ah waana mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan tan iyo markii sawirka la isticmaalo, guud ahaan dhaqameed, kaas oo walxaha asalka ah ayaa lagu daraa si loogu daro qosol ama xariifnimo, iyadoo la bixinayo dareen tacabur ah oo ku martiqaadaya akhristaha inuu iibsado majaladda oo uu naftiisa dhex galo madadaalada.
Waa ikhtiyaarka ugu yar ee maanta la isticmaalo, kaas oo qoraalka inta badan la isticmaalo, ama qoraal iyo muuqaal soojiid ah oo cajiib ah. Laakiin si sax ah, sababtoo ah waa dhif, waxay kaa caawin kartaa gaarista yoolkeena: soo jeedi dareenka akhristayaasha.
Daboolka fikradda iyo la taaban karo
Waxaa loo tixgelin karaa sida dabool cajiib ah, mararka qaarkood loo isticmaalo joornaalada sawir-qaadista ama arrimaha naqshadeynta. Isticmaal sawiro ama sawiro naqshadahoodu ay la xiriiraan fikrado adag ama kakan si degdeg ah, fudud oo fudud.
Qaar ka mid ah jaantusyada joornaalka ee ugu waxtarka badan ayaa u isticmaala midabka si aad u yar, taas oo caddaynaysa in qulqulka fudud ee midabka geesiga ah uu ka soo jiidan karo palette midab dhalaalaya.
Isku-dubbarid hal midab oo geesinimo leh oo leh sawir madow iyo caddaan ah iyo qoraal hal-tane leh, waxay u egtahay mid cajiib ah wargeysyada ragga iyo cinwaannada teknoolojiyadda. Qoraal-qoraalka dhalaalaya, boodhadhka, iyo qaybiyayaashu waxay siyaan qaabka ciyaaraha, gees labnimo.
Marka akhristuhu furo joornaalka, waxa ku jira bogaggu waxay noqon doonaan meesha ugu horeysa. Nuxurka bogaggu waa inuu noqdaa mid shaqaynaya oo u oggolaanaya akhristayaasha inay si fudud u helaan qaybo iyo maqaallo, laakiin sidoo kale waa meesha ugu habboon ee lagu jimicsado hal-abuur yar.
Haddii joornaalku leeyahay tiro badan oo ka kooban, markaa ha ku xaddidin macluumaadkaaga hal bog, u kala beddel waxa ku jira bogag labanlaab ah. Tani waxay ku siin doontaa boos kugu filan si aad u geliso madax weyn oo loogu talagalay waxa ku jira, isku day farta serif fidsan ama nooc kale oo saameyn weyn lehiyo sawirro soo jiidasho leh oo kooban.
Isticmaal agabka sida sawirada oo dhiirigeli
Ka fiirso bandhig kasta oo joornaal ah waxaadna ogaan doontaa in daboollada intooda badani ay u isticmaalaan sawiro sidii dhexdhexaadintooda sawirka. Si kastaba ha ahaatee, daboolka sawirku wuxuu u ekaan karaa mid gaar ah oo aad u qurux badan, waana doorasho weyn oo loogu talagalay tignoolajiyada, farshaxanka, iyo cinwaannada naqshadeynta. Garaafyada fidsan aad bay u fududahay in la abuuro waxayna ka dhigi karaan majaladdaada mid si gaar ah u eegaysa.
Baro Adobe Illustrator, CorelDRAW ama Inkscape si aad u abuurto garaafyo vector ah oo si fudud loogu isticmaali karo halabuurkaaga InDesign.
Vectors waa hab fiican oo lagu muujiyo fikrado badan oo aan la taaban karin ama khiyaali ah, natiijaduna waxay tahay doorashada ugu fiican ee wargeysyada aan ku habboonayn moodada caadiga ah ama qaab nololeedka.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeynta tifaftirka. Hadda waa wakhtigaaga si aad u bilowdo naqshadaynta sawir-gacmeedyada ugu horreeya ee daboolkaaga koowaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo dabool
Sida loo abuuro sawirro qoraal ah